Kaarka Ganacsiga ee Wordle! | Martech Zone
Erey dhacay ka xardho a lamaanaha toddobaadyo horaantii iyo bloggers ayaa guuxay! Wordle waa codsi Java ah oo beddelaya kanaga daruur tag galay wax qurux badan.
Waxaan u maleynayay Erey wuxuu ahaa mid qabow, laakiin daruuri maahan in wax lagu qoro.
Maanta waan la tashaday Sharpminds. Mid ka mid ah dadka kulanka ku jira, Linda Watts, waxay dhiibtay kaarkiisa isla markiibana wejigeyga ayuu dhoola cadeeyay!
Linda waxay laheyd aruurin dhan oo iyaga ka mid ah (iyo sidoo kale naqshado kale oo gaar ah), gogol kastaa wuxuu diirada saaraa keywords iyo weedho kala duwan, dhammaantoodna leh macluumaadka xiriirkeeda dhabarka! Sidee cajiib ah hal abuur leh! Waxaan u maleynayaa haddii aan ahaan lahaa wiilasha Wordle, in aan shaqaalaysiin lahaa Linda oo aan iyada masuul uga noqon lahaa kaarka ganacsiga qeybtiisa!
Linda waxay ahayd Maamulaha Shabakada 9-kii sano ee ugu dambeyay waana mid hal abuur leh, karti iyo xamaasad badan. Waan ku kaftamay iyada oo ku saabsan geek - fikradeeda fasalka ayaa si aad ah loogu daray.
Waa sababta aan u jeclahay barashada Xalka BitWise Dhacdooyinka Sharpminds, Wax badan ayaan ka bartay kaqeybgalayaasha oo aan ka baxo anigoo dareemaya sidii inaan wax u bartay wax ka badan inta aan wax baray.
Linda waxay hadda rajeyneysaa xirfad cusub sida Web, Web 2.0, iyo Daabac Teknoolojiyad daabacan. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad wicitaan siiso iyada fikradaha asalka ah! Waxaan jeclaan lahaa inaan ka fekero fikirkan markaan ka hadlayo xulashada kaararka ganacsiga Isbuucaan! Ma hubo haddii Linda ay raadineyso shaqo waqti-buuxa ah - waa inaad weydiisaa haddii aad fursad u haysato suuq-geyn dhammaystiran oo dhammaystiran, in kastoo.
Tags: kaarka ganacsitagdaruur tagtags
Sida loo Cusbooneysiiyo Sidebar Dhacdooyinka WordPress ah ee laga helo iCal adoo adeegsanaya Google Calendar (iyo waxyaabaha kale ee Google Fun!)
Jul 31, 2008 markay tahay 10:13 PM
Waad ku mahadsantahay Doug. Dib ayaan ugu soo qoray tweet-gaagii asalka ahaa maxaa yeelay aad baan u jeclahay. Waxaan la ciyaaray Wordle dhowr saacadood markii aan soo laabtay waxaanan la imaaday 3 daruuro kala duwan oo aan ku dhajiyay gidaarkayga shaqada.
Hadda, waxaan u maleynayaa inay jiri karaan dhowr siyaabood oo kale oo qabow oo loo isticmaali karo kuwan.
Markii aan ka fikirno shaxanka - marar dhif ah ayaan u tixgelinnaa awoodda ereyada inay yihiin aasaaska waxa badanaa ku saleysan sawirka.
Sawirku wuxuu noqon karaa mid qiimihiisu yahay kumanaan eray laakiin erey daruur ah ayaa laga yaabaa inuu kaaga qiimo badan yahay intaad ku odhan lahayd booska yar ee kaarka ganacsiga!
Aug 1, 2008 at 7: 46 AM
Si fiican ayaa loo yidhi, Lynn!
Aug 1, 2008 at 8: 51 AM
Waad ku mahadsan tahay xusuusinta cajiibka ah ee maqaalka maanta. Waa sidee habka lagu bilaabo maalintayda!
Kaadhadhkayga joogtada ahi waxay ku sugayeen sanduuqa boostadayda markii aan guriga imid shalay. Waxaan kuu soo dirayaa muunad. Waan ogahay inaad la dhacayso tayada Daabacaadda Moo.
Aug 1, 2008 at 9: 12 AM
Oo ma waxaa laga yaabaa inaan ku daro sida aan ugu riyaaqay fadhigii shalay. Waxaad iga dhigtay inaan dib uga fikiro isticmaalida baloogyada waxaanan ku shaqeyn doonaa mid ka mid ah natiijada.
Aug 1, 2008 at 9: 36 AM
Mahadsanid Linda! Waxay ahayd koox weyn oo dad ah oo ka soo qaybgalay - taasi marwalba way fududeyneysaa.
Agoosto 1, 2008 saacaddu markay ahayd 1:09 PM
Waa inaad jeclaataa Wordle. Si xiiso leh ayaa igu filan waxaan usbuucii la soo dhaafay ka sameeyay goobtayda "kaararka ganacsiga". Waxaan jeclahay xaqiiqda ah inaad beddeli karto nidaamka midabka. Dhagxaanta ereyada. Meeshayda waad ka arki kartaa halkan http://cardsfreebusiness.com/
Agoosto 1, 2008 saacaddu markay ahayd 1:18 PM
Ku dar midkan ururintayda
Agoosto 1, 2008 saacaddu markay ahayd 3:38 PM
WOW, sidee qabow !!! Aad ayaan ula dhacay